​ कमल खत्रीले पुजालाई भने तिमीमा डुबी सके
१४ आश्विन २०७२
१४,असोज काठमाडौँः गायक कमल खत्री र गायिका पूजा गुरुङले गाएको गित तिमीमा डुबी सके म्यूज़िक भिडियो सार्बजनिक भयेको छ । भिडियो को निर्देशन निकेश खड्काले गरेका छन भने धीरज जंग शाहले सिनेमा टो ग्राफी प्रस्तुत गरेका छन । भिडियोमा माला लिम्बु र सोयम गुरुंगले अभिनय गरेका छन । विस्तृत समाचार »
भिडियो स्क्यान्डलपछि कोही हिट, कोही गुमनाम
१४, असोज काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका कलाकारहरु विवादमा आइरहन्छन् । विशेष गरेर महिला कलाकारहरु विवादमा आउँछन् । नेपाली चलचित्रमा विवादमा आउने महिला कलाकारहरुले छिटो प्रगति गरेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । यतिबेला ती कलाकारहरु कै नेपाली चलचित्रमा बोलवाला पनि छ । कुनै समयमा मोडलिङमा दबदवा राखेकी नम्रता श्रेष्ठको सेक्स टेप सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा परिन् । त्यही बेला उनले खेलेको फिल्मलाई फाइदा पुग्यो ।…विस्तृत समाचार »
‘बाग्मति’ टिजर हमालको साथमा
१० असोज,‘बाग्मति’ टिजर हमालको साथमा अहिले सम्मकै सर्वाधिक महंगो नेपाली फिल्म बागमतीको टिजर सार्वजनिक गरिएको छ । ४३ सेकेन्डको सार्वजनिक ट्रिजरमा महानायक राजेश हमाललाई प्रस्तुत गरिएको छ ।दक्षिण भारतीय निर्माण टीमले फिल्मको प्रमोसनको लागि सार्वजनिक ट्रिजरमा हेर्दा महानायक राजेश हमालको फेरी नेपाली चलचित्रमा पुन कमव्यक हुने देखिन्छ ।धेरै नेपाली चलचित्र दक्षिण भारतीय जस्तो बनाउने कोसिस गरे पनि यसपाली दक्षिण भारतीय निर्माण टीमले नै सजिकै…विस्तृत समाचार »
किन भागे नायक आर्यन विहे मण्डपबाटै ?
अभिनेता आर्यन सिग्देललाई अभिनेत्री आशिका तामाङले बिहेको मण्डपबाटै उठाउँदा तनाव भएको छ । सुरविना कार्कीसँग विवाहका लागि तयार भईरहँदा आशिकाले आर्यनलाई भगाईदिएपछि उनका दाजुहरुले आर्यनको खोजी गर्दा तनाव भएको हो । तर यो तनाव भने वास्तविक चाहिँ होईन् । आगामी कार्तिक ३ गतेबाट अल नेपाल रिलिज हुन लागेको फिल्म ‘सुश्री’को सार्वजनिक ट्रेलरमा यी दृश्यहरु दर्शकले हेर्न पाउनेछन् । ब्बचथबलआशिका फिल्मस् प्रालिको व्यानरमा निर्मित यो फिल्मको…विस्तृत समाचार »
अनलाइन भिडियो यौनशिक्षा सुरु गर्दै अभिनेत्री जेसिका
एजेन्सी । अमेरिकी अभिनेत्री जेसिका बेलले यौनका विषयमा महिलाहरुलाई शिक्षित बनाउने अभिप्रायले अनलाइन भिडियो शिक्षा सुरु गर्न लागेकी छिन्। उनका अनुसार सो भिडियोबाट उनले महिलाका शरीरको बारेमा पर्याप्त जानकारी दिनेछिन्। महिलाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था ‘विमनकेयर ग्लोबल’ की संस्थापक सान्ड्र पेलेटियरसँग मिलेर उनले यस्तो काम गर्न लागेकी हुन् । उनले गर्भवती हुँदाको समयमा आएका सवालबाट प्रेरित भएर शरिरका कुन अंगले कसरी काम गर्छन् भन्ने…विस्तृत समाचार »
रिलिज नहुँदै सलमान खानको फिल्मलाई २ सय करोड
मुम्बई । सलमान खान अभिनित पछिल्लो फिल्म ‘प्रेम रतन धन पायो’ले रिलिज नहुँदै दुईसय करोड बढी कमाई गरेको छ । सुरज बड्जात्याको निर्देशनमा बनेको उक्त फिल्म दिपावलीको अवसरमा प्रदर्शन हुने भएको छ । सुरज र सलमानको जोडी ‘मैने प्यार किया’वाट सुरु भएको थियो । त्यसपछि पनि उनीहरुले मह आपके है कौन, हम साथ(साथ जस्ता फिल्ममा काम गरेका थिए । यी सबै फिल्म बक्स अफिसमा हिट…विस्तृत समाचार »
किनगरे रणबीरले दीपिकालाई गाली ?
मुम्बई । रणबीर कपुर र दीपिका पादुकोणको प्रतिक्षित फिल्म ‘तामाशा’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । टे्रलर ३ मिनेटको छ । टे्रलर हेर्दा लाग्छ यसमा रणबीरले पागलप्रेमीको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । एकसिनमा त रणबीरले मज्जाको गाली समेत गर्छन् दीपिकालाई । समग्रमा भन्ने हो भने प्रेम, रोमान्स र मस्तीलाई मज्जाको स्थान दिईएको छ फिल्ममा । इम्तियाज अलिको निर्देशन रहेको यस फिल्ममा मुख्य भुमिका दीपिका रणबीरकै…विस्तृत समाचार »
‘वडा नम्बर ६’ चल्नुका कारण
‘वडा नम्बर छ’ चल्नुको कारण खोज्ने हो भने यसको श्रेय दुई ब्यक्तिलाई जान्छ । दीपकराज गिरी र उज्वल घिमिरे । प्रारम्भमा विषय छान्ने काम दीपकले गरेका थिए भने यसलाई परिस्कृत गर्ने काम उज्जवलले गरेका थिए । यसको स्क्रिप्ट लेखनमा मात्रै तीन महिना लागेको थियो । स्क्रिप्टको अन्तिम फाईनल गर्दा निर्देश घिमिरे र गीरिले हात्तीवन रिसोर्टमा १५ दिन बिताएका थिए । हाँस्य विधामा प्रभाव जमाएका कलाकारहरुले…विस्तृत समाचार »
अमेरिकामा दर्शकको मन जित्दै ठ्यासकुमारी अमेरिका । निर्मली वा ‘ठ्यास कुमारी’को नामले चर्चित हास्य कलाकार निरु खड्का दुई महिनाभन्दा लामो दसैँ तिहार धमाका कार्यक्रम लिएर अमेरिकामा व्यस्त छिन् । निरुले आफ्नो एक दशक लामो कला यात्रामा ‘मेरी बास्सै’ जस्तो सफल हास्य टेलिचलचित्र, ‘सानीमा मार्देउ बरु बगाइदेउ पानीमा’ जस्तो मार्मिक म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरी दर्शकको मन जित्न भएकी छन् । जितु नेपाल, बद्री पङ्गेनी, शिला आले…विस्तृत समाचार »
ऋतिककै साथीसँग बिबाह गर्ने तयारीमा सुजैन
मुम्बई । बलिउड नायक ऋतिक रोशन सन २०१४ मा श्रीमति सुजैन खानसंग सम्बन्ध बिच्छेदका कारण चर्चामा रहे । अघिल्लो वर्ष नेभेम्बरमा छुट्टिएका सुजैन र ऋतिक अहिलेसम्म सिंगल छन् । ऋतिकको अहिलेसम्म कुनै युवतिसंग नाम जोडिएको छैन भने सुजैन बिबाहको तयारीमा रहेको चर्चा छ बलिउडमा । उनी को साग बिबाह गर्दैछिन भन्नेमा मिडियाले सार्वजनिक नगरेपनि सुजैनको हुनेवाला श्रीमान ऋतिकको पुराना मित्र रहेको बुझिएको छ । ऋतिक…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 97 98 99 100 101 Older